I-Geodesic Dome ethandekayo maphakathi nezintaba! - I-Airbnb
I-Geodesic Dome ethandekayo maphakathi nezintaba!
Monteiro Lobato, São Paulo, i-Brazil
Indawo yonke ibungazwe ngu-Alexandre
I-wifi esheshayo engu-50 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela endaweni ehlanganyelwayo.
Siyakwamukela ku @ clubedomato, indawo engaphezu kwamamitha angu-120,000 lapho uzoba nesikhathi esiphelele sokuxhumana nemvelo nokuthula.
Lapha sikhetha iphuzu ngenye yezindawo ezinhle kakhulu ukwakha i-geodesic dome zonke izinkuni. Inephaneli yonke yengilazi, phambi kombhede. Cabanga ubona izinkanyezi ebusuku, uvuka kuze kube sekuphumeni kwelanga (sinikeza izifonyo kulabo abafuna ukulala kakhudlwana).
Amanani angahluka kuye ngenkathi.
Iqhele ngamakhilomitha angu-140 kuphela ukusuka e-São Paulo, esifundeni sase-Monteiro Lobato, egqumeni elithulile nelinokuthula yi-Clube do Mato. Indawo ezelwe ngesiphakamiso sokuletha okokuzithokozisa okuyingqayizivele endaweni yokuhlala nolwazi ngezindawo zasemaphandleni. Ukwakhiwa kwethu kokuqala yi-Geodesic Dome. Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni yabantu abangu-2.
Inqaba ye-geodesic eyisakhiwo esiyindilinga, konke okwenziwe ngokhuni oluphathwe ngokwemvelo. Ubumnandi phakathi nalezi zakhiwo buhlukile. Amamitha-skwele ayo angu-38 anekamelo lokulala ne-mezzanine, ikhishi elinesitofu, uhhavini, i-fribogar, nazo zonke izitsha ezifiselekayo "Abapheki". Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ine-air-conditioning, indlu yokugezela evulekile neshawa kagesi. Iphuzu eliphakeme ngokungangabazeki iphaneli yengilazi ecabangela amaketanga asezintabeni zase-Monteiro Lobato.
I-Dome yayihlelwe ukuzungeza umbhede omkhulu, ibeka phambili ukulala kwesivakashi kanye nokokuzithokozisa kokuphumula. Ngakho-ke sinomatilasi oyingqophamlando kaZissou nemicamelo eletha ubuhle obuntofontofo, ukwesekwa, nokuthintwa.
Ukusuka emnyango ukuphuma usungazwa kakade ukuba khona kwemvelo. Inqaba inengadi yayo yemifino yezinongo, itiye nemifino yezivakashi ezingayisebenzela ngokuthanda kwayo.
Iqembu lesihlahla nongquphantsi akulona ihhotela, kodwa kunalokho okokuzithokozisa okufuna ukuhlanganisa ubulula bezindawo zasemaphandleni nokunethezeka.
Isayithi itholakala ekupheleni komgwaqo, indawo inokuvikeleka okuningi, ubumfihlo nokuthula. Sithembele ku-gazebo, imizila emincane yangaphakathi, kanye ne-agroforestation yokuvuselela nokukhiqiza ukudla okuthile. Kodwa i-Mantiqueira iyisifunda esinezimanga zokuhlola, izimpophoma, ukuhamba ngezinyawo, namanye amadolobha anjenge-São Bento do Sapucaí, i-Santo António do Pinhal, i-San Francisco Xavier isekude ngehora.
Endaweni ephakeme ngamamitha angu-915, sisesimweni sezulu esipholile futhi esihle, esinezinsuku ezishisayo nezinelanga kodwa sisabanda ngalolo suku ebusuku.
nge-Sao Jose dos Campos okungafinyelelwa ngemigwaqo emikhulu efana ne-Dutra noma i-Airton Senna.
Kungumgwaqo nje ongcolile wamamayela angu-2. Noma kunjalo, asitusi izimoto eziphansi kakhulu (sedans) noma izimoto ezibalele ngoba kungumgwaqo ongcolile, kungenzeka ukuthi uncamathele ezansi kwemoto.
Iphasela lase-Monteiro Lobato yi-Bairro dos Souzas.
Kukhona ukuthengiswa kwemikhiqizo engokwemvelo, ye-vegan, kanye nemikhiqizo engalimazi imvelo lapha.
Iphinde ibe nemakethe enakho konke ongakucabanga, amamayela angu-2 nje ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe.
E-Monteiro Lobato sinezindawo zokudlela zazo zonke izitayela, i-bistro, indawo yokudlela yase-Italy, ibha yokudla okulula nendawo yokudlela yokudla kwasezweni.
Kunemizila engenziwa, kokubili emagcekeni endawo nasezindaweni eziseduze.
Ngizotholakala uma kwenzeka kuvela noma yini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Monteiro Lobato namaphethelo